Shaqaalaha Dowladda iyo kuwa caadi ah oo berri la amray in shaqada laga fasaxo (Sabab) | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » Shaqaalaha Dowladda iyo kuwa caadi ah oo berri la amray in shaqada laga fasaxo (Sabab)
Shaqaalaha Dowladda iyo kuwa caadi ah oo berri la amray in shaqada laga fasaxo (Sabab)
daajis.com:- Wasiir ku xigeenka wasarada shaqaalaha iyo arimaha bulshada Dowladda dowladda Cabdicasiis Saalax Carmaan oo maanta saxaafadda kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa amar ku bixiyey in la fasaxo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa aan dowliga aheyn.
Wasiirka ayaa amarkaan ku micneeyey inay berri tahay Maalinta shaqaalaha adduunka, sidaas darteedna ay lagama maarmaan tahay in laga farxiyo shaqaalaha Soomaaliyeed iyadoo la raacayo qodobada u dajisan shaqaalaha radidka ah ee dowladda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa hambalyo ku aadan Maalinta Shaqaalaha adduunka hawada usoo mariyey ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa aan dowliga aheyn.
Wuxuuna sheegay in Maalinta Berri ah Shaqaalaha oo dhami ay fasax ka yihiin shaqooyinkooda, iyada oo ay tahay 1da Bisha May oo ah Maalinta Shaqaalaha Aduunka. Wuxuuna wasiirku Hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan Shaqaalaha iyo Qoysaskooda gaar ahaan kuwa Soomaaliya iyo guuda haan kuwa aduunka oo uu ugu duceeyay in ay sanadkan iyo ka dambaba ku gaaraan Bashabash, Barwaaqo iyo Caafimaad Qab.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in wasaaradiisa ay awoodeeda isugu geeneyso sidii dhallinyarada shaqo loogu abuuri lahaa si looga badbaadiyo tahriibka badda iyo inay ku biiraan ururka dhibaatada ku hayo Soomaaliya ee Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii wasiirka ayaa ugu baaqay dhammaan hey’adaha dowladda inay fuliyaan amarkaan isla markaasna ay fasaxaan dhammaan shaqaalaha dowladda, sidoo kalana hey’adaha iyo shirkadaha kale wuxuu ka codsaday inay shaqaalahooda fasaxaan.